Paositra Malagasy Tsy tonga niatrika ny fifamindram-pahefana ny tale jeneraly teo aloha.
Notontosaina omaly ny fifamindram-pahefana teo amin’ny tale jeneralin’ ny Paositra Malagasy (PAOMA) teo aloha sy ny tale jeneraly vaovao. Tsy maintsy nirosoana avy hatrany izany na nisy aza ny tsy fahatongavan’ny tale jeneraly teo aloha.
Ny filankevitrin’ny ministra farany teo no nahitana fa nasorona teo amin’ny toerana maha tale jeneralin’ny ministeran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny Hai-taozavatra i Rakotomalala Nirina Augustin ary nasolo toerana azy ny tale jeneraly lefitrin’ny ministera teo aloha, Ranalison Richard.
Raha ny nambaran’ny filohan’ny filankevim-pitantanan’ny PAOMA, tsy maintsy miroso amin’ny fanolorana ny tetiandro fampiasam-bola na ny “calendrier budgétaire” amin’ny tompon’andraikitra ny ministera alohan’ny 19 desambra izao ka tsy maintsy miroso ny asa. Ny filankevim-pitantanana ihany koa no nahatsikaritra ny tsy fahatomombanana ka nanolotra tale jeneraly vaovao, izay ny filankevitrin’ny ministra no tompon’ny teny farany.
Izay no tsy maintsy nirosoana tamin’ny fifamindram-pahefana na dia tsy tonga nanantanteraka izany aza ny tale jeneraly teo aloha. Niantso avy hatrany ny vadin-tany ny teo anivon’ny ministera hanaovana ny fitantanana an-tsoratra tsy fahatomombanana na ny “PV de carence” ary dia natao ihany ny fanomezam-pahefana ny tale jeneraly vaovao.
Tetsy ankilany, nanambara ny tale jeneraly vaovao fa ny hanatsara hatrany ny toeran’ny Paositra Malagasy no tanjony. Nandritrin’ny fifandimbiasam-pahefana ihany dia nametram-pialana tsy ho mpikambana ao amin’ny filankevim-pitantanana ity tale jeneraly vaovao ity. Hita taratra nandritry ny fifandimbiasam-pahefana araka izany fa maro tokoa ireo lesoka eo anivon’ny ministeran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny Hai-taozavatra.
Ankavanana : Richard Ranarison Tale Jeneraly vaovao Paositra Malagasy